Copy Cats dia iray amin'ireo tsara indrindra sariitatra fomba lalao fa afaka milalao na oviana na Casino slots toerana ambony. Ny foto-kevitry mampahatsiahy ny malaza 'Tom sy Jerry' fampisehoana ary mitodika tena mahatsikaiky koa. The slot ho ambony ny resahana ny tanàna amin'ny trano manodidina, amin'ny mifaritra mahitsy amin'ny andro mazava. Misy dimy reels amin'ny 25 paylines sy ny lalao mamela anao hanitsy ny loka ambaratonga sy ny vola madinika sarobidy toy ny isan-ny safidiny. Ny hilokana fetra dia eo £ 0.25 sy ny £ 250 isan-kofehy ireny. Misy sariitatra fomba mozika Jazz eo aoriana izay miteraka fihetseham-po amim-pifaliana no.
Momba ny developer ny Copy Cats
Io fomba maro loko sariitatra slot lalao fa afaka milalao amin'ny Casino slots toerana ambony dia novokarin'ny NetEnt. Ny tena malaza amin'ny aterineto Casino lalao vahaolana mpanome an-jatony isan-karazany samy hafa lalao anaram-boninahitra ny lisitra.
Izany no tena manintona maso lalao amin'ny maroloko foto-kevitra sy ny tsara tarehy marika. Ny marika dia mena mahatsikaiky face saka, Pink mahafatifaty face saka, tezitra face saka manga, ny kilalao totozy, tavoahangy ny ronono sy ny trondro taolana. Ny mahatsikaiky mena face saka no karama an-tampon'ny mariky amin'ny 200 fotoana eo amin'ny tsato-kazo dimy amin'ny karazany. Ny fanehoana an'ohatra ny zava-dehibe ambany ity Casino slots toerana ambony lalao efatra miloko samy hafa saka tanan'ny dian. izy ireo mandoa 25 ny fotoana samy amin'ny tsato-kazo dimy tsara fanahy. Ny volamena sy ny saka saka mariky ny vozony tie lakolosy no tombony fanehoana an'ohatra.
Wild Bonus: Ny volamena saka dia ny bibidia marika Ary Solon'i manavaka ny lakolosy rehetra mariky. Raha ny fivoaky ny hita ao amin'ny stacked fananganana mba handrakotra ny voalohany miraingiraingy azon'ny, dia mahatonga copycat endri-javatra. Raha izany dia, ny saka rehetra ny marika avy amin'ny reels roa na dimy kosa ho any an'ala.
ampielezo Bonus: Ny lakolosy dia fanehoana an'ohatra ny aelezo endri-javatra io Casino slots toerana ambony lalao. Toa iray ihany reels, telo ary dimy. Raha ny endriny telo mitranga, ianao nahazo maimaim-poana folo spins. Spins ireo dia azo indray niteraka nandritra ny lalao maimaim-poana koa.
Copycat Feature: Ny feno saka niisa misy marika dia mampiasa endri-javatra ity. Rehefa mitranga izany, ny hafa rehetra saka fanehoana an'ohatra eo amin'ny reels hitodika ho any amin'ny saka izay niteraka ny endri-javatra. Raha ny mena dia mampiasa copycat saka dia handresy ny ambony indrindra tsato-kazo satria dia ambony-sarobidy mariky.
Izany no iray amin'ireo tena marevaka sy ny endri-javatra-manan-karena lalao fa afaka milalao na oviana na Casino slots toerana ambony. Ny sary sy ny sarimiaina ao amin'ny lalao hiaro anao voly mandritra ny fotoam-pivoriana.